शनिबार, कुन भगवानको कसरी गर्ने पूजा ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com शनिबार, कुन भगवानको कसरी गर्ने पूजा ? - खबर प्रवाह
काठमाडौँ- हिन्दु धर्ममा विश्वास राख्ने मानिसहरुले हप्ताको सातै दिन फरक फरक भगवानको पूजा गर्ने चलन रहेको छ ।
विशेष व्रत उपवास बाहेक हप्ताको कुनै एक दिन त्यो भगवानको लागि व्रत बसेर पूजा गर्ने गर्छन् ।
आज शनिबार शनिदेवको पूजा गर्ने चलन रहेको छ ।
मूर्ति रूप मा गर्नु हुदैन शनिको पूजा
यसरी गरौँ पूजा
शनिवारको पूजा गर्दा यो कुराको ध्‍यान राखौँ । यस दिन पीपलको रुखको जरामा नै जल अर्पण गरौँ।